यो पर्वतमा आउने योगी र सिद्ध पुरुष हरू एकदमै फरक किसिमका थिए— निकै उग्र र प्रचण्ड रूपका । यस्ता थुप्रै महापुरुषहरूले यो पर्वतमा पाइला राखेका छन्, जसलाई देखेर स्वयं देवताहरूले पनि ईर्ष्या गर्ने थिए किनकि उनीहरूले निकै ठूलो गरिमा र महानता अनि अनुग्रहले जीवन व्यतीत गरेका थिए । यी महापुरुषहरूले आफूले जानेको सम्पूर्ण कुरालाई यो पर्वतमा छोडे, जसलाई यसले आत्मसात गऱ्यो— र, यो कहिल्यै हराउन सक्दैन । यो त्यही पर्वत हो, जहाँ मेरा गुरुले पाइला राख्नुभएको थियो, साथै त्यही स्थान हो, जसलाई उहाँले आफ्नो शरीर त्याग्नको लागि रोज्नुभएको थियो । त्यसैले, यो हाम्रो निम्ति पर्वत मात्रै होइन, यो हाम्रो निम्ति एउटा मन्दिर हो ।
काशी— शाश्वत शहर
जब योगीहरूले ब्रह्माण्डको प्रकृति नियाले— यो कसरी स्वयं आफैबाट प्रकट भइरहेको छ, अनि कसरी अनन्त रूपमा फैलिन सक्दछ भन्ने जस्ता कुराहरू नियाले— तब उनीहरू आफ्नै सृष्टि बनाउनको लागि लालायित भए । काशीमा, उनीहरूले शहरलाई नै उपकरणको रूपमा निर्माण गरे, जसले स्थूल र सूक्ष्म बिच एकत्व (एक हुनुको अवस्था) ल्याउँछ । यो जाबो मान्छेमा समेत ब्रह्माण्डसँग जोडिने अद्भुत सम्भावना रहेको हुन्छ, तथा ब्रह्माण्डसँग एक हुँदाको सुख, परम–आनन्द र सौन्दर्य जान्ने सम्भावना रहेको हुन्छ । ज्यामिति वा बनावटको दृष्टिकोणले, विशाल ब्रह्माण्ड र सूक्ष्म जगत् कसरी मिल्न सक्छन् भन्ने कुरा दर्शाउनको निम्ति काशी सटीक उदाहरण हो । यस भूमिमा यस्ता थुप्रै उपकरणहरू रहेका छन्, तर काशी जस्तो शहर निर्माण गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा हुनको लागि पागलपन चाहिन्छ । र, यो काम उनीहरूले हजारौँ वर्ष पहिल्यै गरेर देखाए । त्यहाँ ७२,००० वटा तीर्थस्थानहरू थिए— मानव शरीरमा सोही सङ्ख्यामा नाडीहरू हुन्छन् । यसको समग्र प्रक्रिया यस्तो छ कि मानौँ ज्यादै ठूलो मानव शरीर निर्माण गरिएको छ, ताकि विशाल ब्रह्माण्डिय शरीरसँग सम्पर्क बनाउन सकियोस् । यही कारणले गर्दा, यो परम्पराको सुरुवात भएको होः "यदि तपाईं काशी जानुभयो भने, त्यो नै सबैथोक हो ।" तपाईं त्यहाँ गएपछि त्यो स्थानलाई छोड्न चाहनुहुन्न, किनकि एकपटक जब तपाईं ब्रह्माण्डिय प्रकृतिसँग जोडिनुहुन्छ, तपाईं किन कतै अन्त जान चाहनुहुन्छ र ?
हामी अतीतबाट बचेर त आएका छौँ, तर प्रश्न के हो भने, के हामी भविष्यमा पनि बच्न सक्ने छौँ ? ‘हामी’ भन्दाखेरी म कुनै निश्चित धर्मलाई लक्षित गररहेको छैन । म यो धरतीको त्यस आवाधि (जनसङ्ख्या) को कुरा गरिरहेको छु, जो जीवनलाई यसको वास्तविक रूपमा हेर्न इच्छुक छन्— आफ्नो धारणा अरूमाथि थोपर्ने प्रयास नगरिकन ! विश्वलाई कुनै धार्मिक विचारधारा, सिद्धान्त वा विश्वास–प्रणालीहरूको आवश्यकता छैन । आवश्यक के हो भने, हामी जुन आयामहरूलाई "गूढ र परको" ठानिरहेका छौँ, त्यसलाई बोध र अनुभूति गर्नको निम्ति मनुष्यमा हुने सामर्थ्यलाई सम्भव बनाइनुपर्छ । यही तरिकाले मात्रै मनुष्यले जान्न सक्नेछ । यही तरिकाले मात्रै मनुष्यको चेतना विस्तार हुनेछ । यही एकमात्र तरिका हो, जसमार्फत मानव समाजहरूमा विद्यमान सम्पूर्ण सङ्कीर्ण विभाजनहरूबाट मनुष्य माथि उठ्न सक्दछ ।